ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र कार्यकुशलताका चिनिनुपर्ने हो । सरकारी सर्त पूरा गर्ने वाचासहित आयोजना सम्पन्न गर्न तम्सिनुपर्ने हो । अहोरात्र खटिनुपर्ने, कामदार खटनपटन गर्नुपर्ने । बेलैमा योग्य काम फत्ते गरेर अर्को आयोजना फुत्काउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । राज्यको कामको मान राखेर आफ्नो सम्मान हासिल गर्नुपर्ने हो ।
कानुनका किताब उनीहरूकै हतियारका कारखाना पादरी र प्रोफेसर उनीहरूकै जज र जेलरसमेत उनीहरूकै सबै हाकिम उनीहरूकै बर्ताेल्त ब्रेख्त, जर्मन कवि/नाटककार राजा वीरेन्द्रको निरंकुश शासनकालमा भएको थियो, नमिता–सुनिता बलात्कार र हत्याकाण्ड ।
तेह्रथुमस्थित लालीगुराँस नगरपालिकामा लिम्बु समुदायसँग सम्बन्धित चोत्लुङ पार्क (सिद्धिस्थल) बन्दैछ । त्यहाँ मेयर अर्जुन माबुहाङले लिम्बुको मुन्धुममा लिम्बुनी फूलको कुरा आउने हुनाले पार्क वरिपरि रोप्न चाहेका रहेछन् । उनले लिम्बुनी फूल कुन वनस्पति होला भनी मसँग जिज्ञासा राखे ।
त्यहीँ पर लगनखेलमा एक महिनादेखि थुप्रिएको फोहोर थान्को नलागेर के भो ? यता सात वटै देशका झन्डा झकिझकाउ माइतीघर मण्डलामा राति पनि तिहारझैं झिलझिले उज्यालो चम्किन थालेको छ ।
यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।
केही साताअघि ४० वर्षदेखि र ६० नाघिसकेका महिलाको रगत जचायौं । जचाउनेमा धेरैजसो मासु नखाने महिला थिए । अरू पनि सातामा एकचोटि मात्रै खानेहरू थिए । शरीरमा रगत, क्याल्सियम र भिटामिन बी १२ कति छ भनेर पत्ता लगाउनु थियो ।
प्रहरीकहाँ जानु नै ठेस लाग्नुजस्तो भयो भने कुन नागरिकले न्यायको आस गर्छ ? महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमाको निश्चल हारगुहार प्रहरीले सुरुमै वास्ता गरेन । अहिले राति भइसक्यो, भोलि खोजी गरौंला भन्ने रुखो जवाफ दियो ।
कृष्ण पाैडेल, टीका भट्टराई
सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसमा अघिल्लो मस्यौदाका केही राम्रा प्रावधान हटाएर र नराम्रा व्यवस्था थपेर नागरिक शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्ने आरोप आएका छन् । मस्यौदाका मुख्य विषयलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
प्रसंग १४ वर्षअघिको हो । नवलपरासीकी एक महिलाको रेडियो अन्तर्वार्ता लिनु थियो । बाहिर केहीबेर कुराकानी गरेपछि उनलाई स्टुडियोमा लगेँ । अन्तर्वार्ता सुरु भएको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो, उनी भक्कानिएर रोइन् । कुराकानीको विषय थियो– वैवाहिक बलात्कार । उनलाई मजाले एकछिन रुन दिएँ । हल्का भएपछि उनले व्यथा पोखिन् ।